Japana : Fitomboana Tahanà Famonoantena Be · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Marsa 2018 2:52 GMT
Nandritra ny faran'ny herinandro (17-18 May 08), nitatitra resaka trangana famonoantena maro ny filazambaovao Japone izay misy ifandraisany amin'ny fampiasàna “gaz de sulfure d'hydrogène”, tamin'ny fanomezany famaritana amin'ny antsipirihany ny singa ao anatiny sy ny fomba nampiasana azy, hatramin'ny mombamomba ireo niharan-doza ihany koa. Tena nipariaka be sy namendrofendro be ilay fanadihadiana vao nivoaka tsy ela akory izay, hany ka notakian'ny Japan Suicide Prevention Association (Fikambanana Japone Miady Amin'ny Famonoantena) ny mba hitandreman'ireo vondrona filazambaovao misimisy kokoa amin'ny famoahana ireo fanadihadiana ataony [jp]. Niteraka resabe tamin'ireo blaogera Japone ilay tranga, izay samy manana ny heviny mikasika io lohahevitra io.
Nanao fanamarihana toy izao momba ilay tranga ilay blaogera Misuto :
Hoy ilay blaogera hakobe nanoratra :
Sary lehibe ho an'ny fanentanana manohitra ny famonoantena ao Tokyo : “Satrinay ianao hiaina”Misy amin'ireo blaogera no manakiana ny fomba fiasan'ireo filazam-baovao manoloana ilay tranga. Ito blaogera ito izao dia manolotra sosokevitra ny amin'ny tokony hanafoanana tanteraka ny famoahana vaovao mikasika famonoantena :
Noresahan'ilay blaogera taishibrian ny fomba nahalasa ny aterneto ho sehatra hironan'ny kiana ary notsipihany koa fa tsy manaraka ny toromarika avy amin'ny OMS momba ny famoahana trangana famonoantena ireo filazambaovao Japone :
(Jereo ato ny amin'ny teny anglisy)